राहतको विषयमा झडप, असईको टाउको फुट्यो । – NagrikPath
अपराध स्थानिय समाचार
राहतको विषयमा झडप, असईको टाउको फुट्यो ।
Nagraikpathadmin April 24, 2020	No Comments
परासी, बैशाख १२ ।
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नं. १७ मा राहत वितरणको कुरामा झडप भएको छ । झडप कै क्रममा सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका असईको टाउको फुटे काे छ ।
नगरपालिका को वडा नं. १७ कार्यालय देउगावले आज बड्दै गरेको राहतमा केहि स्थानियले आपत्ति जनाएका थिए । उनिहरु पनि राहत नपाएको भन्दै वडा कार्यालय नै घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि केही व्यक्तिहरुको सक्रियतामा वडा कार्यालयमा ताला पनि लगाईयो । प्रहरी जानकारी पाउनसाथ वडा कार्यालयमा गई लगाईएको ताला खोलाएर बसेर कुराकानि गरौं भन्दा भन्दै त्यहाँ चार्काचर्कि भएर झडप हुँदा असई चाम बहादुर ओलिको टाउको फुटेको वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष जितबहादुर गोसाईले बताउनु भएको छ । ठुलै लफ्डा हुन्छ भनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परासी बाट आएको प्रहरीले ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि अरु तित्तरवित्तर भएको वडाअध्यक्ष गोसाईले भनेका हुन् ।
ताला लगाउनेमा विपन्न घरपरीवारका नभई १०÷१२ कठ्ठा जग्गा भएका व्यक्तिहरु रहेको गोसाईले भन्नु भएको छ । उनिहरुको भनाई अनुसार सम्पुर्ण गाँउले नै पाउनु पर्छ तर त्यस्ता घरपरीवार नभएका नपाउने “उँहाले” भन्नु भयो । वडामा रहेका २०० जना विपन्न घरपरीवारहरु लाई राहत वितरण गर्ने कार्य रहेको छ । तर अन्य जो बिपन्न घरपरीवारमा पर्दैन्न उनिहरुले पनि राहत चाहियो भनेर अडान लिईरहेको गोसाईको भनाई छ । अहिले त्यहाँको वातावरण शान्त भएकोले राहत वितरण गर्ने कार्य जारी रहेको छ ।
यता झडपमा असई ओलिको टाउको फुटेपछि प्रहरीले स्थानिय ४ जना लाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकाहरु लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याईएको र उनिहरु माथि थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी न्यायब उपरीक्षक विरेन्द्र थापाले बताउनु भएको छ ।
Previous Previous post: ओली र देउवाबीच छलफल, प्रचण्ड पनि मिसिए
Next Next post: विश्वभर २७ लाख ९० हजार संक्रमित, १ लाख ९५ हजारको मृत्यु